Hababka barashada: laba war xun (laakiin sidoo kale laba wanaagsan) | Tababarka Garashada
Hababka barashada: laba war xun (laakiin sidoo kale laba wanaagsan)
Kuwa ka shaqeeya cilmu -nafsiga barashada, waxbarashada, barbaarinta ama waxbarashada si nidaamsan ayaa ugu dambayn la kulma su'aasha ah "qaababka waxbarashada". Fikradaha asaasiga ah ee sida caadiga ah la isku dayo in la gudbiyo badiyaa waa laba:
qof kastaa wuxuu leeyahay hab u gaar ah oo uu wax ku barto (tusaale ahaan, muuqaal, maqal ama kinesthetic);
shaqsi walba si fiican ayuu wax u baranayaa haddii macluumaadka loo soo bandhigo si waafaqsan qaabkiisa waxbarasho.
Kuwani waa fikrado soo jiidasho leh, kuwaas oo aan shaki ku jirin inay siiyaan aragti adag oo ku saabsan macnaha guud ee barashada (oo inta badan loo arko “duugoobay”); waxay noo oggolaadaan inaan u eegno dugsiga (iyo wixii ka dambeeya) macnaha guud ee firfircoon oo leh shaqsi ahaan, ku dhowaad dawaar-sameynta.
Laakiin tani runti ma runbaa?
Halkaan ayaa yimid warkii ugu xumaa.
Aslaksen iyo Lorås waxay sameeyeen dib -u -eegis yar oo ku saabsan suugaanta sayniska ee mawduuca, iyagoo soo koobaya natiijooyinka baadhitaannada ugu waaweyn; wixii ay arkeen, xogta gacanta ku jirta, waa tan uun: wax u baro si waafaqsan qaabka waxbarasho ee uu doorbiday qofka (tusaale ahaan, ku soo bandhigida macluumaadka qaab muuqaal ah "daawadayaasha") wax faa’iido ah oo aan la qiyaasi karin kuma soo kordhinayso kuwa wax ku baranaya habdhaqan aan ahayn kii ay door bideen.
Dareenkan, habka macallimiin badan ayaa markaa dib loo eegi doonaa, gaar ahaan tixgelinta xaddiga shaqo dheeri ah oo ku lug leh wax ka beddelidda waxbaridda ka dib tilmaamaha waxa u muuqda khuraafaad neuro halkii ay ka ahaan lahayd xaqiiqo.
Haddaba waa maxay xiriirka ka dhexeeya hababka waxbaridda iyo caqiidooyinka marka loo eego qaababka barashada?
Halkaan ayaa yimid war labaad oo xun.
Dib -u -eegis kale oo ku saabsan suugaanta sayniska ee mawduuca wuxuu tilmaamay in badi macallimiinta cad (89,1%) ay u muuqdaan kuwo ku qanacsan wanaagga waxbarashada oo ku salaysan qaababka wax -barashada. Ma jirto dhiirigelin dheeraad ah oo ah in caqiidadani si weyn isu beddelin markaan sii wadno sannado badan oo aan ka shaqaynaynay beerta (xitaa haddii, waa in la sheegaa, macallimiinta iyo barayaasha leh heerka ugu sarreeya ee waxbarashadu waxay umuuqdaan kuwa ugu yar ee ku qanciyay sheekadan neerfaha ).
Maxaa la sameeyaa markaa?
Halkaan ayaa yimid war wanaagsan marka hore.
Tallaabada ugu horreysa waxay noqon kartaa faafinta macluumaadka saxda ah inta lagu jiro tababarka macallimiinta iyo barayaasha mustaqbalka; maya, uma muuqato waqti lumis: dhab ahaantii, isla dib -u -eegista suugaanta gudaheeda waxaa lagu ogaadaa, ka dib tababar gaar ah, boqolleyda macallimiintu waxay weli ku qanacsan yihiin waxtarnimada hab ku salaysan qaababka waxbarashada (shaybaarka baaray, waxaan ka gudubnaa celcelis hore 78,4% ilaa mid ka mid ah 37,1%).
Waa hagaag, qaar baa hadda la yaaban sida barashada ardayda loo wanaajin karo maadaama habka qaabka barashada uusan u muuqan mid wax ku ool ah.
Waa hagaag, halkan waa markaa war labaad oo wanaagsan: farsamooyinka baridda iyo barashada run ahaantii waxtar leh (tijaabo ahaan loo muujiyey) waxaa jira e hore ayaan maqaal ugu hibeynay. Sidoo kale, mustaqbalka dhow waxaan ku soo laaban doonaa mawduuca an maqaal kale oo had iyo jeer u heellan farsamooyinka ugu waxtarka badan.
WAXAAD KALOO QABAN KARTAA:
Farsamooyin si loo wanaajiyo barashada: oo runtii wax ku ool ah?
Hagaajinta is-xakamaynta barashada iyadoo leh hal tilmaam
Disleksiya: Noocee waxbarasho?
Maskaxda ma ku haysaa qof walba siduu gaari karo?
Ma tababbari kartaa xusuustaada?
Heerka waxbarashadu ma saameeyaa IQ?
Guusha tacliimeed. Welwel, dhiirigelin iyo feejignaan: maxaa runtii muhiim u ah in si fiican loogu sameeyo dugsiga?
Dhiirigelinta ayaa garaacday IQ 1 - 0!
Aslaksen, K., & Lorås, H. (2018). Qiyaasta qaabka wax-barasho ee qaaska ah: dib-u-eegis yar. Xuduudaha hore ee cilmu-nafsiga, 9, 1538.
Newton, PM, & Salvi, A. (2020, Diseembar). Intee in le'eg ayay aaminsan tahay qaababka wax -barashada neuromyth, oo muhiim ma tahay? Dib -u -eegis nidaamsan. Gudaha Xuduudaha Waxbarashada(Cadadka 5, bogga 270). Xuduudaha.
waxbarashada, barashada afka, barashada muuqaalka, qaababka waxbarashada
Hababka barashada: laba war xun (laakiin sidoo kale laba wanaagsan)2021-08-232021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/stili-di-apprendimento.-due-cattive-notizie-ma-anche-due-buone.jpg200px200px
Farsamooyinka lagu Kobcinayo Barashada: Kuwee Run ahaantii Wax -ku -ool ah? Qeybta 2
Farsamooyinka lagu Kobcinayo Barashada: Kuwee Run ahaantii Wax -ku -ool ah? Qeybta 1
Kordhi is-xakameynta is-barashada ee tilmaanta fudud
Dysleksi. Qaabkee waxbarasho?
Ha ilaawin inaad wax baratid
Saamaynta covid -ka ee hawlaha garashadaNeuropsychology
Farsamooyinka lagu Kobcinayo Barashada: Kuwee Run ahaantii Wax -ku -ool ah? Qeybta 2Barashada, Maqaallada, Xusuusta, Habka Barashada, Neuropsychology